AT&T mepee ndozi Samsung Gear S3 taa | Akụkọ akụrụngwa
AT&T emepe Samsung Gear S3 tupu nye iwu taa
Onye ọrụ ahụ ga-atụ anya ihe ndị ọzọ na mmalite nke ndoputa ma ọ bụ tupu ịzụrụ nke smart watch site na ụlọ ọrụ South Korea, taa na-ekwe ka ndị ọrụ nọ na United States iji mejuo ọchịchọ ịnweta ya ma na-echekwa ego. N'ezie, ọ bụ naanị ụbọchị ole na ole fọdụrụ maka mmalite nke ihe eji eme ihe a ma ugbu a nnabata nke ndị ọrụ na-agba ume maka ahịa na-ata ahụhụ n'ihe banyere ire ahịa na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na ha emeziwanye ugbu a na Krismas mkpọsa na-abịa.
N'ọnọdụ ọ bụla, ihe anyị doro anya bụ na ụdị ahụ ndị ọrụ AT&T nwere ike idowe ọ bụ Samsung Gear S3 Frontier, nke nwere njikọ 4G LTE. Ọnụ ego elekere ahụ bụ euro 249,99 mana ọ bụrụ na onye ahịa ahụ na-edebe Samsung ama, elekere ga-ahapụ maka naanị $ 50 ọzọ. O doro anya na nkwekọrịta afọ abụọ.
Oge nche a na-eguzogide mmiri, uzuzu, ujo na ọkọ, ya nwekwara GPS, igwe okwu na ndị ọkà okwu ịnata ụda nke oku ahụ. E gosiputara ya na IFA 2016 na Berlin na Spain, a na-atụ anya na ọnụahịa nke elekere elekere a anọ na 399 euro. Dị ka ịmata ihe, ọ dị mkpa iburu n'uche na ọ ga-adaba na Apple's iPhone, mana o doro anya na ọ ga-enwe nhọrọ dị ntakịrị karịa maka ndị ọrụ Samsung. Na nke a anyị nwere ike ikwu na ndozi tụnyere gara aga version bụ ọtụtụ na anyị na-amasị imewe ke ofụri ofụri ezi a bit, anyị kwesịrị iji belata ọnụahịa a bit nke mere na ọ bụ otu nhọrọ n'ezie na-echebara site ụfọdụ ọrụ ndị adịchaghị maka ọrụ na elele ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » AT&T emepe Samsung Gear S3 tupu nye iwu taa
WhatsApp 'Ọnọdụ', akwụkwọ ọhụrụ na Snapchat
Ndị a bụ egwuregwu nke ọnwa maka PlayStation Plus na Xbox Gold na November